UDkt Marshall Maposa, onguthisha KwezoMlando WezeMfundo, usanda kuhlonishwa yi-English Academy yaseNingizimu Ne-Afrika ngendondo yekhethelo i-Thomas Pringle Award yePhepha Elihamba phambili Kwezemfundo, phecelezi ‘i-Best Education Article’ eyashicilelwa ngonyaka wezemfundo wezi-2017.
Umklomelo, oqanjwe ngembongi nombhali, u-Thomas Pringle, ungumklomelo waminyaka yonke womsebenzi oshicilelwe emaphephandabeni, amaphepha abhalwa yizifundiswa kanye namajenali.
I-athikili kaMaposa edle umhlanganiso ikhuluma ngokubonakaliswa koMAfrika ezincwadini zomlando waseNingizimu Afrika. Isuselwa ephepheni lakhe locwaningo lweziqu zobudokotela, i-athikhili iveza ukuthi ukubonakaliswa koMAfrika kugcwele amaphuzu aphambene neqiniso ngenxa yezinqubo nomongo wokukhiqizwa kwezincwadi zokufundisa.
Ephepheni lakhe, udingida ukuthi le ncazelo inomthelela othile ekuqondeni uMAfrika, izincwadi zokufundisa ezidweba ngayo isithombe esiya kwabazisebenzisayo bese lo mqondo ubonakala ezenzweni zabo.
'Ucwaningo lolu lwazalwa ngenxa yemizamo yami yokuxhumanisa ucwaningo lwami nokufundisa kwami. Nginentshisekelo enkulu ngomlando wase-Afrika nangendlela ofundiswa ngayo futhi lolu cwaningo luhlobene namamojuli engiwafundisayo ezingeni labafundi abenza iziqu zokuqala nabaqhubekayo nezinye iziqu. Ngase ngivele nginayo intshisekelo ngezocwaningo lwezincwadi zokufundisa ngakho ngaxhuma izintshisekelo zami ezimbili ngaqhamuka nalolu cwaningo. Kule athikhili, nganquma ukugxila kuMAfrika njengoba ngidingida ukuthi ukuqonda kwethu lo mqondo kunomthelela endleleni esicabanga ngayo ngokuba ngaMa-Afrika,' kusho uMaposa.
Wanikezwa indondo nguMongameli we-English Academy yaseNingizimu Ne-Afrika, uSolwazi Mbongeni Malaba, ochaze uMaposa ‘njengomuntu olokhu ephikelela empumelelweni yakhe yocwaningo olushukumisa ugebhezi futhi oluhambisana nezikhathi.'
IDini neNhloko yeSikole sezeMfundo, uSolwazi Thabo Msibi, utuse impumelelo kaMaposa wathi, 'Le ndondo ingeyokubungaza omunye wethu obhale iphepha elingundabizekwayo nelihlobene nesihloko sokuqedwa kokucindezeleka kwezingqondo zethu yizimfundiso zasentshonalanga. Siyaziqhenya ngoDkt Maposa. Uyinxusa eliqavile lokusebenza ngokuncomekayo kwezocwaningo.'
Uthe uMaposa, 'Ngizizwa ngihloniphekile kakhulu ngokuba umsebenzi wami uthole ukwaziswa. Ngazi izifundiswa eziningana ezike zahlomula ngalo mklomelo ngaphambilini ngakho-ke kuyintokozo enkulu kimina ukuthola ukuhlonishwa ngendlela efana neyazo. Futhi kuyintokozo enkulu kimina ukwazi ukuthi umsebenzi engiwukhiqizayo awugcinanga ngokufundwa kuphela, kodwa uphinde wakhethwa njengomsebenzi weqophelo eliphezulu. Lesi yisikhathi sentokozo enkulu kimina nabo bonke abasondelene nami.'
Iseluleko sakhe kwezinye izazi zezemfundo sithi, 'Cwaninga ngalokho onentshisekelo ngakho, yiba nokuqiniseka ngamakhono akho, uziqhenye ngomsebenzi wakho, kodwa futhi ube ngowokuqala ukuwugxeka uma kudingeka. Ngolunye usuku umuntu othile, omkhulu noma omncane, uyoyincoma imizamo yakho kanti lokho kuyoba ngumhlomulo omkhulu.'
Amagama nesithombe: nguMelissa Mungroo